Rohingya Muslims “persecuted” after Myanmar crackdown says report | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Whit cardရှိသော ဘင်္ဂလီများအား မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်ကြောင်း လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးပြော
ရိုဟင်ဂျာများ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်း လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြေညာ »
Tags: Bangladesh, Burma, Myanmar, Rakhine, Rakhine State, Rohingya, Rohingya people, Thein Sein
This entry was posted on August 1, 2012 at 11:01 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Rohingya Muslims “persecuted” after Myanmar crackdown says report”
August 1, 2012 at 11:03 am | Reply
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်စလင်မ်များ ဆက်လက်ဖိနှိပ်ခံနေရ
ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာ-ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခအပြီးနောက်တွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မွတ်စလင်မ်များထံသို့ ရိက္ခာ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ကို တောင်ကုတ်မြို့ခံများနှင့် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ရခိုင်အလွှာစုံက ပြုလုပ် နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ကုန်စည်စီးဆင်းမှုက လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ မွတ်စလင်မ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ကျောက်နီမော်ဆိပ်ကမ်းရောက်မှ ပြန်သယ်သွားတယ်။ တောင်ကုတ်မှာ အခုအထိ စုပုံထားတယ်”ဟု ကျောက်နီမော်တွင် ရိက္ခာပြတ်လပ်မှု စတင်ခံစားနေရသဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသူတစ်ဦးက myanmarmuslim.net သို့ ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်၊ ပြည်၊ မန္တလေးတို့ ကျောက်နီမော်သို့ ယခင်က လွတ်လပ်စွာ ကုန်စည်တင်ပို့ခွင့်ရခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ တောင်ကုတ်မြို့ခံများက ကြားဖြတ်၍ မွတ်စလင်မ်တို့ထံသို့ ပို့ဆောင်မည့်ကုန်စည်များကို တားဆီးဟန့်တားခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါ လူမဆန်သည့်လုပ်ရပ်များကို
လုပ်ဆောင်နေသူများမှာ တောင်ကုတ်မြို့လယ်လမ်းမတွင် မွတ်စလင်မ် ၁၀ ဦးကို ၃ နာရီကျော်ကြာ သတ်ပွဲကျင်းပရာတွင် လှုံ့ဆော်သူများအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့သည့် ၀ံသာနုရက္ခိတ ဂိုဏ်းဝင်များဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“ဒီနေ့သူတို့ အနီရောင်အလံတွေ ထောင်ထားတယ်။ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူတွေ ဒီနေ့ နောက်ဆုံးပဲ။ နောက်နေ့ မရောင်းရတော့ဘူး လို့ အသံတွေထွက်နေတယ်” ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပင် ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ယခင်များမကြာမီ ရက်ပိုင်းတွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်တို့အား ထောက်ပံ့နေသည့် အဖွဲ့များအား ရန်လိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ရိက္ခာများ ပို့ဆောင်မရအောင် အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ရိက္ခာ ပို့ဆောင်သည့် လမ်းတွင် ကားများသွားမရစေရန် ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲကြီးများထားခြင်း စသည်တို့ကို
ပြည်တွင်းရှိ ရခိုင်လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် အလွှာစုံက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ဘုန်းကြီးအချို့ဟာ မွတ်စလင်ဒုက္ခသည် စခန်းတွေအနားမှာ စောင့်နေပြီးတော့ (မွတ်စလင်တွေကို) အကူအညီ ပေးဖို့လာတဲ့သူလို့ ထင်ရင် မောင်းထုတ်နေတယ်လို့ စစ်တွေမှာ ရှိတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောတယ်”ဟု အာရကန်ပရောဂျက်၏ ဒါရိုက်တာ ခရစ်လီဝါ၏ ပြောကြားချက်ကို The Independent သတင်းဌာနတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စစ်တွေနှင့် မောင်တောမြို့များသို့ “လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို စစ်ဆေးရန် ကိစ္စဖြင့် သွားရောက်နေ သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် သောမတ်အိုဟေး ကင်တားနားသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရသည့် မွတ်စလင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ မီဒီယာအချို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို စစ်ဆေးရန် ဟူသော ခေါင်းစဉ်နှင့် အညီ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြင့်မူ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလည်း သတင်းဖော်ပြချက်များ အရသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေးဖိနိုပ်မူများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသေးကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ ကထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင်ဖေါ်ပြထားကြောင်း RFA သတင်းတစ်ရပ်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။ http://myanmarmuslim.net/news.php?extend.767